पोर्नस्टार खलिफाले किन बिग बोस स्वीकार गरिनन् ?
पोर्न स्टार मिया खलिफाले भारतीय टेलिभिजन शो बिग बोस–९ मा सहभागी नहुने बताएकी छन् । उनले उक्त घोषणा ट्वीटरमार्फत गरेकी हुन् । लेवनानी–अमेरिकी पोर्न स्टार मिया खलिफा (@miakhalifa ) ले ट्वीटरमा लेखेकी छन्–म एउटा कुरा स्पष्ट गर्दछु, म भारत कहिल्यै जाँदै छैन । त्यसैले जोकसैले पनि मैले बिग बोसमा भाग लिने इच्छा देखाएको खबर फैलाएको छ, त्यसलाई जागिरबाट निकाल्नु आवश्यक छ। गत साता भारतीय संचार…विस्तृत समाचार »
कस्तो छ कंगनाको ‘कट्टी बट्टी’ ?
निर्देशक निखिल आडवाणीले बनाएको बलिउडको आशातित चलचित्र ‘कट्टी बट्टी’ एक हलिउड चलचित्रबाट प्रभावित छ । यो चलचित्रका मुख्य नायक इमरान खान आफूले साँचो प्रेम गरेको यूवती कंगना रनावतसँगको प्रेम सकियो या छैन भन्ने बिषयमा नै घोत्लिन्छन् ।कंगना(पायल) करिब ५ बर्ष एकसाथ लिभिङ टूगेदरमा रहेपछि इमरान खान(म्याडी)लाई छाडेर हिड्छिन् । यो चलचित्रमा पायल एक सुन्दर यूवतीको रुपमा देखिएकी छिन्, जसलाई ‘आफू कस्ती हुँ’ भन्ने संझिन नै…विस्तृत समाचार »
करोड क्लवमा वडा नम्बर ६.......
गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ले शनिबारसम्म एक करोडको कारोबार गरेको छ । चलचित्र वितरक गोपाल कायस्थका अनुसार शनिवार साँझसम्म फिल्म करोड क्लबमा प्रवेश गरेको हो । राजधानीका २४ वटा पर्दाहरुबाट प्रर्दशनमा आएको फिल्मले शनिवार ३१ वटा पर्दा पाएको छ । फिल्मले शुक्रबार मात्रै २७ लाख ३५ हजारको ग्रश कलेक्सन गरेको थियो । शनिवार झनै शुक्रबार भन्दा बढी मान्छेको फ्लो हलमा देखिएको थियो…विस्तृत समाचार »
३ आश्विन २०७२
मुम्बई । भारतीय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने नवौं सिजनको ‘बिग बोस’का सम्भावित प्रतियोगीहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । यो सुचीमा केही टेलिभिजन कलाकार, मोडल तथा रियालीटी शो स्टार सहभागी हुने छन् । यद्यपि, प्रतियोगीहरुको अफिसियल घोषणा हुन भने बाँकी नै छ । अहिलेसम्म यो कार्यक्रमका सन्दर्भमा तीनवटा प्रोमो सार्वजनिक भएको छ । तर शो कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने पनि पक्का छैन । केही सञ्चारमाध्यमले भने ११…विस्तृत समाचार »
अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट नेपाली समुदायको प्रशंसा
२३ भाद्र २०७१
भर्जिनिया । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको प्रशंसा गरेका छन् । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको संगठन एएनएको ३२ औं सम्मेलनमा सन्देश पठाउँदै राष्ट्रपति ओबामाले भनेका छन्-‘नेपालदेखि अमेरिका आई विभिन्न ओहोदामा रहेर सेनादेखिविस्तृत समाचार »
१२ अषाढ २०७१
६ फिट लामो चितुवाको छालासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्युरोको टोलीले काठमाडौं–१५ मा छालासहित कारोबारीलाई पक्राउ गरेको ६ फिट लामो चितुवाको छालासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्युरोको टोलीले काठमाडौं–१५ मा छालासहित कारोबारीलाई पक्राउ गरेको ६ फिट लामो चितुवाको छालासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्युरोको टोलीले काठमाडौं–१५ मा छालासहित कारोबारीलाई पक्राउ गरेको ६ फिट…विस्तृत समाचार »
तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन
तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन वर्षमा मह उत्पादन वर्षिक पाँच हजार टन तीन…विस्तृत समाचार »
घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी
घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका विजयी, नाइजेरिया र इरान बराबरी घानाविरुद्ध अमेरिका…विस्तृत समाचार »
४ अषाढ २०७१
प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा जर्मनी सेना लडाइँका लागि फ्रान्स पुग्न प्रयासरत थियो। जर्मन सेना जर्मनीबाट सिधा फ्रान्स पस्न सकेन। त्यसपछि .प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा जर्मनी सेना लडाइँका लागि फ्रान्स पुग्न प्रयासरत थियो। जर्मन सेना जर्मनीबाट सिधा फ्रान्स पस्न सकेन। त्यसपछि .प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा जर्मनी सेना लडाइँका लागि फ्रान्स पुग्न प्रयासरत थियो। जर्मन सेना जर्मनीबाट सिधा फ्रान्स पस्न सकेन। त्यसपछि .प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा जर्मनी सेना लडाइँका लागि फ्रान्स…विस्तृत समाचार »
२७ जेठ २०७१
‹ First Newer 98 99 100 101 Older